I-Field End Contemporary yasemaphandleni ikhabhathi. - I-Airbnb
I-Field End Contemporary yasemaphandleni ikhabhathi.
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguPam
Ibhari encinci eyakhiwe kunye nabahlobo ngexesha lokunyuswa kweshedi. Ilula, inesitayile, inobushushu obuphantsi, icompact kodwa inengqiqo yendawo. Idekhi ene-hammock kunye ne-barbcue inabela kumabala angasemva. Ngaphantsi komgangatho oshushu othandekayo ovulekileyo weebhedi ezitofotofo kodwa ezinobunewunewu. Imizuzu engamashumi amathathu ukuya eOxford, imizuzu emibini ukuya kwilali yaseGreat Tew naseSoho.
Enye yeepropati ezintathu kwisiza (sihlala kwenye) enye ibizwa ngokuba yi-Artist House kwaye ukuba ibhukishwe kunye ingalala iindwendwe ezili-12 zizonke.
Yakhelwe ekuqaleni njengegumbi lokudlala elikhulu / i-nursery sandisa yongeza kwaye sakha kwakhona njengoko abantwana baqala ukubhabha indlwane yethu ngo-2015. Iyilwe kwaye yakhiwe nguJohn ungabona isakhelo sinyuka ekupheleni kweefoto. Siyinxalenye yeGreat Tew Estate kunye neField End yinxalenye yesiza esibizwa ngokuba yiPotato Town. Imbali yegama iyinto engaqondakaliyo kodwa " Idolophu "iquka iqela lezakhiwo. Ezo zingumda wendlela zizitudiyo zethu kunye neendibano zocweyo, indlu yethu ikwi-engile ezichanekileyo kwindlela kwaye i-Field End sisakhiwo esingasemva. Yahlulwe yigadi kwaye ijikelezwe yindlela, amasimi kunye nentyatyambo kunye negadi yemifuno.
Imiboniso kunye neeklasi ziqhuba iindibano zocweyo kodwa azichaphazeli konke konke ebomini kwi-Field End. Iindwendwe zinendawo yokupaka egciniweyo kunye nesango lokungena elahlukileyo.
4.89 · Izimvo eziyi-120
Ungangena kwilali yaseSwerford kwaye ufikelele kwilizwe elithandekayo uhamba ngokuthe ngqo ukusuka kuthi. Kukwakho neThe Boxing Hare pub ebonelela ngokutya okumnandi kumgama nje oziimitha ezili-150.
Fumana iilali zaseCotswold zaseStow eWold naseBurford. Kufuphi nelali efulelwe ngengca yeGreat Tew kunye nePub yayo edumileyo iFalkland Arms. Ifihlwe kwilali yindlu yaseFama yaseSoho esandula kuvulwa.
I-Daylesford Organic Farmshop yonyango lwe-spa kunye nobunewunewu bukufutshane kwilali yase-Kingham.
Iipropathi zeNational Trust zaseHidcote, Chastleton kunye neUpton zifikeleleka ngokulula njengoko iBlenheim Palace kunye nedolophu yaseWoodstock.
Sithatha ukhokelo lwethu kuwe. Yindawo egqibeleleyo yokubaleka yabucala kodwa sihlala kwaye sisebenzela ekhaya kwaye siyafumaneka ukunceda iindwendwe ukuba ziphendule imibuzo ngayo nayiphi na indlela esinokuyenza.